Slimmer na postroynevshim kwa mgbe ụfọdụ ịchọrọ ụfọdụ ihe ụtọ, sweets, dịka ọmụmaatụ. Na na sweets ndị na-enye anyị ụlọ ahịa na netwọk, ọ dị mkpa na-nwere shuga, na ọtụtụ na doro anya na-adịghị eme ka ya na nkwekọrịta. Kedu ihe m kwesịrị ime?
Ụzọ si apụ bụ ịkwadebe sweets dị ụtọ na bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịkwadebe candies candy nke dabeere na lentil.
Lentil bụ otu n'ime ihe ọkụkụ kasị ochie, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ na ọsọ nke nri. Ụdị lentil ndị dị iche iche, nke dị na agba ha, mara na ha na-agbatị ha ruo oge dịka 20 ruo 45.
Akwukwo Lenti nwere nnukwu ihe ntinye akwukwo nri nke bu digestible, folic acid na eriri ugha. Lentils nwere vitamin dị iche iche (ọkachasị A na B), omega-6 na Omega-3 acid fatty acid na ogige ndị bara uru nke potassium, phosphorus, calcium, ígwè, ọla kọpa, molybdenum, manganese, boron, cobalt, iodine, zinc. Ntinye nke lentil efere na menu emezi metabolism, na-eme ka ọrụ nke genitourinary na immune systems of the body. Na n'ozuzu, ị ghọtararịrị na nke a bụ ngwaahịa bara uru. Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ maka imepụta sweets ụlọ, ga-eburu ihe kasị baa uru.
Chocolate sweets si lentil na ụbọchị na hazelnuts
lentil - 300 ml;
ụbọchị - banyere 150 g;
kernel hazelnuts ma ọ bụ mkpụrụ ndị ọzọ - banyere 100-130 g;
mma koko ntụ ntụ - 2-3 tbsp. ngwunye;
shuga (ọ ka mma n'ụdị ntụ ntụ) - 1-1.5 st. ùkwù;
rum - 1 tbsp. ùkwù;
cinnamon, saffron, cardamom (nhọrọ) - 1 tuo;
Finiki anyị ga-ejupụta na mmiri ọkụ ọkụ nke minit na 30-40, mgbe ahụ, nnu mmiri na n'ụzọ ziri ezi anyị ga-ewepu mkpụrụ nke nkume.
Anyị na-ewepu lentil , na-asa ha, jupụta mmiri oyi na-ekpocha ha ruo mgbe ha dị njikere (gosiri na nkwakọ ngwaahịa, dị ka ọkwa). Anyị nwere ike ịkeda lentil n'ime colander, ị nwere ike ịsa ya mmiri mmiri.
A na-agbanye nucleoli nke mkpụrụ ahụ n'ọkụ grying. Anyị na-ejikọta lentil na mkpụrụ na ụbọchị na anyị na-ete na blender na ala nke uka na-eji ụdị edozi.
Kwadebe ihe ichikota chocolate. Mix koko ntụ ntụ na shuga (a chọrọ sugar ka ọ ghara inwe lumps). Tinye rọm na ngwa nri .
Mix lentil-date-walnut mass with chocolate ncha. A na-edozi ahụ ọkụ site na starch.
Site na uka a, anyị na-etolite (aka) obere bọọlụ dịka teftelek ma ọ bụ meatballs (ị nwere ike, na-edozi candies na ụdị oblong). Ghichaa na starch ma ọ bụ koko ntụ ntụ ma dina na efere. Ruo oge, tinye efere na swiiti n'ime friji.
Ọ bụrụ na ịchọrọ sweets dị ntakịrị na-enye afọ ojuju, ị nwere ike ịbanye n'ime ihe ahụ obere obere mmiri ara ehi na-eme ka ọ dị ụtọ, dịka nke ọma dị ka mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi gelatin.
A na-arụ ọka sụgharịrị ejikere maka tii, kọfị, chocolate dị ọkụ na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ.
Ghaa na banana
Ntụziaka maka mmiri ara ehi
Karọt achicha - uzommeputa
A na-eji mmiri ara ehi na-ezukọta na minit 15
Aka na mmiri
Mmiri ara ehi crusts - nhazi dịka GOST
Mkpụrụ apụl na mmanụ aṅụ
Beeza na mkpụrụ - uzommeputa
Achịcha na pears na obi cheese
Cheesecake na obi cheese - uzommeputa
Odeston - egosi maka ojiji
Ọrụ nke nwatakịrị nọ n'ụlọ
Jellied achịcha na mushrooms
Pansies - na-eto eto si na osisi, mgbe na-akụ na otú e si elekọta seedlings?
Pita achịcha achịcha na oven
Eke na-acha ọcha: anyị na-amata uru bara uru site na ize ndụ
Esi esi esi nri nduku?
Kedu otu esi eri nri Yorkshire - olee otu esi ejide nri nri?
Uwe uwe mgbede dị mkpirikpi
Ijikọta akwụkwọ ahụaja na paseeji
Egbu na ọnụ - akpata
Achịcha na-esi na nsị
Ntughari kachasị ọnụ n'ụwa
Ihe mbụ na ọkwa mbụ
Candlesticks Chlorhexidine - ntụziaka iji mee ihe na gynecology
Mbadamba ụlọnga megide ime ime mgbe a na-emeghị ya
Pikamilon - egosi maka ụmụaka